नि’लो दा’ग बो’क्सीले र’गत चु’सेर देखिएकाे हाे त ? जान्नुहाेस् – Gandaki Chhadke
नि’लो दा’ग बो’क्सीले र’गत चु’सेर देखिएकाे हाे त ? जान्नुहाेस्
काठमाडौं, मानिसकाे शरिरमा नि’लाे दा’ग देखा पर्याे भने बाे’क्सिकाे आ’राेप लगाउने गर्छन् । के साँच्चै बाे’क्सिले टाे’केकाे हाे त ? कहिले काहिँ देखिने याे दा’ग के हाे र यसले दुख्छ ? यस्तो दा’ग र चो’ट किन लाग्छ ? भन्ने बिषयमा आज हामिले केहि जानकारी दिदैछाैँ ।हाम्राे समाजमा बो’क्सीले रगत चु’सेर यस्ताे दा’ग आएकाे भनिन्छ, तर याे हाम्राे अ’न्धबिश्वास मात्र हाे । धेरै जस्ताे महिलाको पाखुरा र खुट्टामा यस्तो दा’ग देखियो भने हाम्राे समाजमा बो’क्सीले चु’सेको भन्छन् । तर, धर्म शा’स्त तथा बैज्ञानिकले पनि बाे’क्सि छ भनेर कुनै गिनिज बुकमा पृष्टि गर्न सकेका छैन्न ।
तर, चिकित्सकहरु शरीरमा नि’लो दा’ग हुनुकाे ८ ओटा कारणल देखिन सक्छ छालामा चो’ट लाग्याे भने याे दा’ग देखिन्छ र चाे’ट जुनसुकै ठाँउमा पनि जहाँ चाे’ट लाग्याे त्यहि देख्छ । कहिलेकाँही आफ्नै शरीरको भागले अर्को भा’ग थि’च्दा पनि यस्ताे देखिन्छ । यसरी चो’ट ला’ग्दा शरीरका र’क्त ध’मनिमा अ’सर पुग्न जान्छ, त्यसैले हाम्राे शरिरमा नि’लाे दा’ग देखिएकाे हाे ।खानामा पो’षण तत्वको क’मिः र’गत ज’म्न र र’गतका ध’मिनिमा लाग्ने चो’टहरु भर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई केही भिटामिन र मिनरलको आवश्यकता पर्छ ।
खानामा यस्तो भिटामिन र मिनरल प्राप्त हुने चिजहरु जस्तै भिटामिन ‘के’ले र’गत जम्न मद्दत गर्छ भने भिटामिन ‘सी’ले त्वचा र र’क्त ध’मनिमा चो’ट ला’ग्नबाट बचाउँछ । यस्तै जिं’क र आ’इरनजस्ता मि’नरलले चो’टलाई छिट्टै नि’को पार्न मद्दत गर्छन् ।क्या’न्सर र कि’मोथेरापीका कारणः क्या’न्सरपीडित र नि’यमित कि’मोथेरापी गर्नुहुन्छ भने पनि शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ । यस्तो यसकारण हुन्छ कि कि’मोथेरापी गर्दा ब्ल’ड प्ले’ट्सहरु धेरै तल आउने गर्छन् । ब्ल’ड प्ले’ट्सहरु तल आउँदा शरीरमा नि’लो दा’ग देखिने गर्छ ।
औ’षधी से’वनका कारणः केही औ’षधि र स’प्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्दा पनि शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन सक्छ । वा’र्फरिन र ए’स्प्रिन जस्ता र’गतलाई पा’तलो बनाउने औ’षधि से’वन गर्दा शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ । यस्तै माछाको तेल, लसुन जस्ता केही प्राकृतिक स’प्लिमेन्ट्सहरु अ’धिक से’वन गर्दा पनि शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ ।ब’ढ्दो उमरका कारणः ब’ढ्दो उमेर र बु’ढ्यौलीका कारणले पनि तपाईंको शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ । ब’ढ्दो उमेरसँगै र’गतका ध’मिनिहरु कम’जोर हुने भएकाले ब’ढ्यौलीका कारण शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ ।
थ्र’म्बोफिलियाको स’मस्याका कारणः थ्र’म्बोफिलिया र’गत जा’म हुने एक प्रकारको स’मस्या हो । यसले र’क्त प्र’वाहमा अ’सर पुर्याउने गर्छ । यसलाई ब्लि’डिङ डि’सअर्डर पनि भनिन्छ, जसका कारण ब्ल’ड प्ले’ट्सहरु धेरै कम हुन्छ । ब्लड प्ले’ट क’म हुँदा शरीरमा नि’लो दा’ग देखिन्छ ।वो’न वि’लिब्रान्ड रो’गका कारणः वो’न वि’लिब्रान्ड रो’ग एक यस्तो अवस्था हो, जसमा अ’त्यधिक र विस्तारित मात्रामा र’क्तश्राव हुने गर्छ । यो रो’ग वो’न वि’लिब्रान्ड नामक प्रो’टिनको स्तरमा र’गतको क’मिका कारण लाग्ने गर्छ । यो स’मस्याबाट पी’डित व्यक्तिको शरीरमा सा’मान्य चो’ट ला’ग्दा पनि शरीरमा ठू’ला नि’लडाम देखिने गर्छ ।
यस वर्ष बूढानीलकण्ठमा एकादशी मेला न’लाग्ने
लुगा फे’र्न लाग्दा निर्माता कोठामा आए: मोडल म’न्दना